Dowladda oo shaacisay hindisyaal lagu hagaajinayo isdhexgalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ylva Johansson, wasiirka suuqa shaqada. Foto: Flickr/ Socialdemokraterna
Dowladda oo shaacisay hindisyaal lagu hagaajinayo isdhexgalka
Dadaalka xukumadda ee isdhexgalka
La daabacay torsdag 19 februari 2015 kl 12.09
Guriyo dhisidda oo la kordhiyo, dadka dalka ku cusub oo dhaqso suuqada shaqada la geliyo, tacliinta iyo waayo aragnimadooda shaqo oo dhaqso loo qiimeeyo.
Iyo in caruurta iyo dhallinyarada dalka ku cusub waxbrashada lagu siiyo afkooda hooyo. Dhamaan waxybahaas waxay ka mid yahiin dadaalo ay dowladda doonayso in ay wax uga qabato siyaasadda is-dhexgalka.
Xukumadda Sweden ayaa maanta shaacisay dadaalo ballaaran oo lagu hagaajinayo isdhexgalka, iyada oo ay hadda soo badanayaan qaxootiga dalka soo gaaraya.
Dadaalka hadafkiisa waxuu yahay sidii qaxootiga dhaqso dalka u dhexgali lahaayeen. Iyadoo qaxootiga dalka soo gaaraya si dhaqso ah suuqa shaqada loo gelinayo, aqoonta ay dalkooda kalo yimaadaana si dhaqso loo xaqiiyinayo.
Caruurta iyo dhalliyarada dalka soo gaartana taaagero dheerad ah lagu siinayo waxbarashada. Xukumadda waxay sidoo kale doonaysaa in ay kordhiso guriyo dhisida. Wasiiradda suuqa shaqada Ylva Johansson oo sharaxaysa arrintan ayaa tiri sida tan:
– Muhiimadda dowladda waxay tahay in aan go’aansanay sidaan iskaga tiirin laheyn caqabadaha naga soo wajahaya dadka badan ee dalka soo gaaraya. Iyo sidaan uga faa’ideysan laheyn badashada dadka oo ka micno ah in ay dadka shaqayn kara sweden soo bateen, ayey tiri Ylva Johansson mar ay u waramaysay l’aanta Ekot.
Hadda sidee ayaa taas lagu suurogelinayaa?, Ylva Johansson iyo mar kale:
– Waa suurogal laakiin siyaasad ayey u baahan tahay. Waxay u baahan tahay in dadaal lagu baxiyo sidii loo kordhin lahaa guriyo dhisidda, siyaasadda suuqa shaqada iyo waxbarashada, ayey tiri Ylva Johansson.
Marna ma wanaagsaneyn siyaasadda ku sabsan soo dhexgelinta bulsahda qaxootiga dalka imaanaya, haddii ahaan laheyd xukuamdahii Socialdemokraterna hormood u ahaayeen ama xukamadahii hantigoosadka hogaaminayeen, sidaas waxaa wargeyska DN maanta ku qoray hogaamiyaasha xisbiyada xukun waddaaga ah ee Miljöpartiet iyo Socialdemokraterna.
Qaxootiga faraha badan ee dalka soo gaaraya waa fursad ay Sweden ka faa’iideysan karto oo waddanka ku helo karo awood cusub oo shaqaale ee waddanka u baahan yahay, iyada oo imminka ay badanayaan dadka howlgabka galaya dalkan Sweden.
Xukumadda ayaa daadaalka ay isdhexgalka wax uga qabanayso ayey u kalo qaaday sida tan:
Dadka shaqo gaarka ah ayaa loo sahlayaa shaqo helidda, iyada oo loo marayo in la hagaajiyo barashadooda af-iswiidhsihka, in la sahlo qiimeynta tacliinta iyo waayo aragnimada shaqo ee ay kalo yimaadan dalkoodii hooyo.
Sidoo kale caruurta iyo dhallinyrada dalka ku cusub ayey xukumadda doonaysa in ay hagaajiso sida iskuulada looga qaabilo iyoo taagero dheerad ah middas lagu siinayo degmoyink dalka. Waxbaridda caruurta iyo dhallinyarada ayaa martka ay dlka yimaadaan maadooyinka kale gedisan lagu siinayaa af-kooda hooyo.
Xukumadda ayaa sidoo kale ku hindineysa in ay wax ka qabato gabaabsiga guriyaha iyada oo ay xukumadda qaadayso tillaabooyin lagu kordhinayo guriyo dhisidda. Ylva Johansson ayaa sharaxaysa:
– Sida xaalka yahay maanta waxaa lagamo maarmaan ah in aah kordhino guriyo dhisadda. Waa sii kordheysaa baahiyada guriyaha iyadoo imminka ay so badnayaa dadyowga dalka soo galaya, marka baahida guriyaha waxay ka taagan tahay waddanka oo dhan, iyo dhamaan degmooyinka oo dhan.
Johansson iyo xukumadduba Ma sheegin dhaqaalaha ku baxaya dadaaladaan. Tafaasiilsha dhaqaalaha ku baxaya waxaa la filayaa in dolwadda ku soo bandhigto miisaaniyadeeda gu’ga. Marka ay timaado isku dheeli tirnaan qaabilaada qaxootiga ee degmooyinka dalka Ylva Johansson fgartiinteeda ayaa ah in loo baahna yahay in degmiiyinka oo dhan gacan ka geystaan qaabilaada.
– Waa lagamo maarmaan in aan wax ka badalno xaalka siduu yahay maanta, ma ahan arin sii socon karta in degmooyinka qaarkood dhbarka u ritaan si xad dhaaf ah masuuliyada qaabilaada halka kuwo kale aysan masuuliyad iska saarin arrintas. Masuuliyadda arrintan waxay saaran tahay waddanka oo dhan, ayey tiri.
In la qasbo degmooyinka aan qaadan masuuliyadda qaabilaada ama dhaqaalo lagu soo jiido, labadas tillaabo midka ay xukumadda doorbidi doonto dib ayaan warkeeda u keeni doonaa ayey tiri Ylva Johansson, wasiiradda suuqa shaqada, mar ay saakay u warameysay laanta wararka ee Ekot.